Ra’isulwasaare kuxigeenka dalka Turkiga oo maanta soo gaaray Muqdisho booqdayna goobaha ay kasocdaan mashaariicda dalkiisu hirgelinayo
Ku-xigeenka Raisul-wasaaraha dalka Turkiga Bekir Bozdag ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho xubnaha wafdigiisa ayaa markii ay kasoo dageen garoonka diyaardaha Aadan Cabdulle Cusmaan waxaa siweyn usoo dhaweeyay mas,uuliyiinta dowlada Soomaaliya gaar ahaan wasiirka Arrimaha dibeda ahna Ra.isulwasaare kuxigeen Fowsiyo yuuusf Xaaji Aadan.
Wafdigan ayaa lasoo galbiyay qeybaha kale ee magaalada isagoo kormeer kutagey xarumo ay horay Dowlada Turkigu uga hirgelisay Soomaaliya kuwaasoo uu soo indha indheeyay sida ay u shaqeynayaan.
Bekir Bozdag Ayaa inta uu kusuganyahay magaalada Muqdisho waxa uu dhagaxdhigi doonaa xarun Lagu barto cilmiga beeraha taasoo uu Turkigu dalkeena kahirgelinayo isagoo kormeerkiisana kutegi Doona xarumo hor leh iyo qaabka uu usocda dhismayaasha ay Turkigu wadaan sida dib udhiska Wadooyinka caasimada,xarumaha caafimaadka ,iyo sidoo kale goobaha ay ku caawiyaan dadka Dhibaateysan.
Dowlada Turkiga ayaa kawada dalkeena mashaariic farabadan oo lagu horumarinayo Soomaaliya Waxaana ay horay gurmad balaaran ugu sameeyeen dadkii Soomaaliyeed markii ay abaaraha ba’ani Kudhufteen gobolo kamid ah koonfurta Soomaaliya.
Ra’isulwasaare kuxigeenka dalka Turkiga ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay si wadajir ah warbaahinta ula hadlaan isaga iyo mas,uuliyiinta dowlada isagoo kulan la qaadan doona Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xassan Sheekh Maxamuud iyo Ra’isulwasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid kuwaasoo uu kala hadli doono horumarinta xiriirka Turkiga iyo Soomaliya iyo sidoo kale Dadaalka dheeriga ah ee ay madaxda wadanku ugu jiraan dib usoo nooleynta Soomaaliya.